Mfe Nzọụkwụ na Nyefee Video si iPhone (iPhone 6 gụnyere) ka Computer
Ọ bụ na-enweghị obi abụọ na ị ga-ahụ iPhone onye ọrụ na-achọ nile Internet otú nyefee ihe na kọmputa. Iji nyefee ihe dị ka vidiyo na kọmputa gị kwesịrị mfe karịsịa mgbe eji Wondershare Akụ Go Ochie.
Part1: Nyefee Videos Site IPhone ka Computer na TunesGo Rerro Easy na ngwa ngwa
Part2: Iji USB Nyefee Videos Site IPhone ka Computer
Part3: Iji Dropbox nyefee Videos Site IPhone ka Computer
Part4: Iji iCloud nyefee Videos Site IPhone ka Computer
Part5: Iji iTunes nyefee Videos Site IPhone ka Computer
Na a na ngwa na aka gị ga-enwe ike nyefee a ogbe nke faịlụ n'ime mkpirikpi ugboro. Nke a bụ na-ekwu na ọ na-azọpụta oge. Iji expound on bụ na faịlụ na ị nyefee site na ngwaọrụ gị na kọmputa ga-adị mma na mbụ ya àgwà a nọgidere na-enwe. Ka m ya na ị dịghị mkpa ígwé ojii netwọk? Ọ bụghị naanị na Wondershare Akụ Go Ochie ga-emekwa ka ị jikwaa gị playlist. Nke a bụ ga nwere software na i kwesịrị ibudata. Ugbu a, ka m gosi gị otú nyefee gị dị oké ọnụ ahịa na vidiyo si na iPhone na kọmputa kpam kpam. Nke a bụ ọmarịcha na ngwa na-nwere windows version na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Download Wondershare TunesGo Ochie
Gaa Leta http://www.wondershare.com/ na ibudata Wondershare TunesGo Ochie na wụnye ya na kọmputa gị. Ị nwere ike nje gị akpa na ịzụta ya ma ọ bụ jiri free ikpe version. N'ihi na m na m na-na iji free ikpe Mac.
Nzọụkwụ 2 jikọọ gị iPhone na kọmputa
Ị nwere jikọọ gị iPhone na kọmputa na iji eriri USB. Wee mepee ngwa na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Nyefee videos gị PC
Na isi window nke Wondershare TunesGo Ochie ị ga-ahụ gị iPhone na n'elu ekpe na ndepụta nke nchekwa nke ihe ọ e nwere. Pịgharịa gafee nchekwa ruo Movies taabụ. Pịa ya na ndepụta nke gị echekwara videos ga-egosi na ihuenyo. Họrọ fim ị chọrọ nyefee na pịa Export ke n'elu. Cheta na-mata na ọnọdụ nyefee ihe na kọmputa gị.
Ọ bụ otú ahụ ngwa ngwa i nwere ike nyefee vidiyo na kọmputa gị na ebube Wondershare TunesGo Ochie ngwa. Ọzọkwa e nwere ndị ọzọ free ụzọ nyefee music si IPhone na kọmputa dị otú ahụ dị ka iji a USB, na-eji Dropbox nakwa dị ka iTunes. Ka anyị ugbu a anya na onye ọ bụla nke dị n'elu ụzọ
I nwekwara ike nyefee gị vidiyo si na iPhone na kọmputa na-enweghị ngwa. Ihe ị chọrọ bụ kọmputa gị, a eriri USB na iPhone. Mgbe ahụ na-eso ndị ngwa ngwa nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone Iji Computer
Jiri eriri USB jikọọ ngwaọrụ abụọ ọkacha mma onye ị na zụtara gị iPhone.
Nzọụkwụ 2 agba ọsọ gị iPhone na kọmputa gị
Na kọmputa gị gị iPhone ga-egosi na ala ekpe dị ka mpụga nchekwa.
Na kọmputa gị pịa gị iPhone gosipụta ihe ọ na e dere. Gaa vidiyo ma ọ bụ fim na họrọ fim nyefee. Gaa Import na pịa Dezie. Ka idetuo pịa Copy niile họrọ videos.
Nzọụkwụ 4 Nyefee niile videos
Ugbu a gaa kọmputa gị mgbe akọwapụta na ọnọdụ na pịa Tapawa. I nwekwara ike ịdọrọ ihe si iPhone gị na kọmputa. Usoro a bụ a bit ngwa ngwa ebe ọ bụ na ị na-echere maka faịlụ ka-depụtaghachiri na kọmputa gị.
A Dropbox bụ otu faịlụ haring na-enye gị ka izipu na ụlọ ahịa faịlụ. Na a ngwa ị ka nwere ike ịkọrọ videos.
Nzọụkwụ 1 Download na wụnye Dropbox on gị na ngwaọrụ.
Mbụ mkpa ka ị download Dropbox na kọmputa gị na na gị iPhone. Wee wụnye na imeghe ya.
Nzọụkwụ 2 ịhọrọ videos nyefee na gị iPhone
Ugbu a ịgbanwee gị iPhone na-emeghe ngwa Pịa na Uploads. Ị ga-ahụ a + icon, pịa ya. A ga-emecha na-egosipụta ihe na gị iPhone. Họrọ videos nyefee. Kọwaa a ebe nyefee ihe na pịa Bulite na ala nke gị ngwa.
Nzọụkwụ 3 Download vidiyo na kọmputa gị
Na gị Dropbox window na kọmputa gị ị ga-ahụ Họpụtara vidiyo si na iPhone na-achọ na-ebudatara. Pịa na nchekwa na budata ha. Nke a bụ otú ị ga-faịlụ zigara gị na kọmputa na a Dropbox. n
Nkebi nke 4: Iji iCloud nyefee Videos Site IPhone ka Computer
Inwe gị iPhone na kọmputa ị ka nwere ike nyefee videos kpam kpam.
Rụọ ọrụ iCloud foto nkekọrịta na gị iPhone. Gaa iPhone taabụ na pịa Ntọala wee họrọ iCloud
Ugbu a pịa ndabere nchekwa window na-enyere ndị ahụ ndabere ka iCloud bulite video gị iPhone na iCloud pịa Back Up ugbu a
Ugbu a atụgharị gị na kọmputa. Na Mac pịa Apple NchNhr, mgbe ahụ, System Mmasị na họrọ iCloud
Itinye otu ojiji Apple NJ na-aga Photos. Wee pịa na Photo Stream na mbupụ na vidiyo na kọmputa gị.
Na iCloud ị kwesịrị ị na-ejikọrịrị Internet iji ịrụ a mmega ọma
Part 5: Iji iTunes nyefee Videos Site IPhone ka Computer
ITunes bụkwa a mma na apụl ngwaọrụ na-ahapụ gị nyefee faịlụ kpam kpam. Ịnwere ike ịnyefe videos, foto na music n'ọbá akwụkwọ na ndị ọzọ
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri USB.
Mgbe ahụ gaa iTunes na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 Họrọ ngwaọrụ gị na iTunes.
Gaa gị iPhone na iTunes na họrọ ihe na ị chọrọ nyefee na kọmputa. Mgbe ahụ ike a na nchekwa na ịdọrọ niile họrọ ihe gị na desktọọpụ. Ọ ga-ewe oge iṅomi.
Ọ bụ ezie na n'elu ụzọ ike ga-eji nyefee videos na iOS na kọmputa, e nwere ndị ọzọ mma nhọrọ dị ka Wondershare TunesGo. A na ngwa na-ahapụ gị nyefee faịlụ ọ bụla na media ngwaọrụ ngwa ngwa nke n'elu iri atọ formats. Iji tinye on, ọ bụghị nanị na ọ na-akwado windows kamakwa Mac. A na ngwa na-ahazi gị Ọbá akwụkwọ na-ezere mbiputegharị nke faịlụ ẹdude ke iTunes.
N'ihi na Windows ọrụ ị nwekwara ike iji idetuo trans faili. Ọ ga-enyere gị jikwaa faịlụ na gị iOS gadget. SyniOS nwekwara ihe ọzọ ọzọ maka iTunes na-enyere windows mekọrịta ha iOS Ngwa.
E nwere transfer ngwa akpọ Ikuku Nyefee App na ị nwere ike ibudata ma na-eso videos .it dị mfe
Download Ikuku Nyefee App na-agba ya na ma gị iPhone na kọmputa. Jikọọ ngwaọrụ abụọ N'ime otu netwọk
Na gị Mac, na-aga ihe omume na jikọọ na gị iPhone
Mgbe ị na pịa gị iPhone ị ga-ahụ gị mgbasa ozi. Pịa na videos na họrọ ha. N'ikpeazụ download ha gị Mac.
> Resource> iPhone> otú nyefee Videos Site IPhone ka Computer N'ihi Free